कुखुराले अ’ण्डा होइन ब’च्चा नै ज’न्माएपछि – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कुखुराले अ’ण्डा होइन ब’च्चा नै ज’न्माएपछि
कुखुराले अ’ण्डा होइन ब’च्चा नै ज’न्माएपछि
अ’ण्डा पहिले कि कुखुरा ? यो बहस कहिल्यै टुंगिँदैन । तर यो चाहीँ सत्य हो कि कुखुराले अ’ण्डा पार्दछ र अण्डाबाटै चल्ला कोर’लिएर वय’स्क कुखुरा बन्दछ । तर छिमेकी मुलुक भारतको ओडिसा राज्यमा चाहीँ एउटा कुखुराले अ’ण्डा नपारीकनै सिधै चल्ला ज’न्माएको छ । ओडिसाको नुआपाडा जिल्लामा एक कुखुराले बच्चा ज’न्माएपछि मानिसहरु अचम्ममा परेका छन् । स्थानीय इच्छापुर गाउँमा बस्ने अम्बिका माझी नामका व्यक्तिले घरमा पालेको पोथी कुखुराले हालै अ’ण्डाको साटो कोरलिएको चल्ला नै जन्माएको छ । यद्यपि जन्मेको १० मिनेटमा उक्त चल्ला म’रेको थियो । कुखुराले ९ वटा अ’ण्डा पारेपछि अम्बिका माझीले ती अ’ण्डा टिपिरहेका थिए । तर त्यो कुखुरा अचानक केही टाढा गएर बस्यो । कुखुरा लामो समयसम्म एक्लै पर गएर बसेको देख्दा सायद उसले अर्को अ’ण्डा पो पार्न लागेको हो कि भन्ने अनुमान लगाइयो । तर जब उक्त कुखुराले अ’ण्डा पार्नुको साटो चल्ला नै ज’न्मायो तब कुखुरा धनी अम्बिका माझी तिनछक परे ।कुखुराले बच्चा जन्माएको खबर छिमेकमा फैलिएपछि धेरै मानिसहरु हेर्न आए । कतै कुखुराले अ’ण्डा पारेर तत्कालै कोरलेको त होइन ? भनेर उनीहरुले फु’टेको अ’ण्डाको बोक्रा छ कि भनेर यताउता खोजे । तर कुखुराले साँच्चीकै चल्ला नै जन्माएको रहेछ । तर विडम्बना उक्त चल्ला जन्मिएको १० मिनेटमै म’र्यो । कुखुराले अण्डाको साटो चल्ला जन्माएको घ’टना निकै दु’र्लभ हो । स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारीहरुले पनि यस्तो घ’टना आफुहरुले पहिलोपटक देखेको बताए । उनीहरुका अनुसार कुखुराको प्रजनन तन्त्रमै उक्त अ’ण्डा बाहिर निस्किनु अगाडि कोरलिएको र अण्डा पार्ने बेलामा चल्ला नै जन्मिएको हुनसक्ने बताएका छन् । सन् २०१८ मा भारतको केरलास्थित वायनाडमा कुखुराले चल्ला जन्माएको घ’टना सार्वजनिक भएको थियो । त्यसअघि सन् २०१२ मा श्रीलंकाको एक पहाडि क्षेत्रमा कुखुराले चल्ला जन्माएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि चल्ला जन्माउने क्रममा प्रजनन अं’गमा घा’उ बनेका कारण उक्त कुखुरा पछि म’रेको थियो ।
साउदीमा अलपत्र १४५ नेपाली भन्छन्…..- बाथरुमको पनि खान बाध्य छौं !
इजरायलमा नेपालीका लागि रोजगारी खुल्यो ,५०० कामदारको माग, १५०० अमेरिकी डलर तलव हुने !